Wun Yan Kha – Car Sales and Workshop
?? မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်တို့ ဝန်းရံခ Car Auto Service Center ကို အစဉ်အမြဲ အားပေးခဲ့ကြသော မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များ ခင်ဗျာ
??ယခုအခါ Service Center တည်ရှိရာ ဗဟိုလမ်း သည် လမ်းခင်းပြုပြင်လျက် ရှိသောကြောင့် Service Center သို့ လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ လာရောက်နိုင်ရန်အတွက် လမ်းညွှန် အမှတ်အသား အသစ်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
➡️➡️အင်းစိန်လမ်းမကြီး ဗာဒါမှတ်တိုင်အနီး ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်း ဆုံးသည်အထိ(လှိုင် ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေး စခန်းကို သွားသည့်လမ်း) အတိုင်း လွယ်ကူစွာ လာရောက်နိုင်ပါပြီ
လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား ၅ စီးကို နေပြည်တော်ရှိ အထင်ကရနေရာများတွင် စမ်းသပ်ပြေးဆွဲရန် ကုမ္ပဏီဖက်မှ အဆိုပြုထားကြောင်း စက်မှုဝန်ကြီးပြော
နေပြည်တော် လေဆိပ်၊ ဘူတာကြီး၊ ကားကြီးကွင်းနှင့် ဈေးကြီးများ စသောအထင်ကရနေရာများတွင် လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား ၅ စီးကို စမ်းသပ်ပြေးဆွဲပေးရန် Green Power Myanmar Co., Ltd. က သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုက ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၁ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၁ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့တွင် မောက်မယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းငေါင်းဆိုင်ဟိန်းက မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍာအကြောင်းအပြင် အနာဂတ်တွင် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံနည်းပညာသုံး လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား (e bus) စမ်းသပ်မောင်းနှင်အသုံးပြုနိုင်ရန် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ထားပါသည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးခွန်းများမေးမြန်းခဲ့ရာတွင် လျှပ်စစ်ဘက်စ်ကားနှင့်ပတ်သက်၍ “နေပြည်တော်လေဆိပ်၊ ဘူတာကြီး၊ […]
မော်တော်ကားကို လုံခြုံစေဖို့ ကားရပ်ထားပြီး ထားခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ မမေ့မလျော့နဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။ ကားရပ်ထားပြီးရင် ကားသော့ဖြုတ် ကားပိတ်ပြီး ကိုယ်နဲ့မကွာ ယူဆောင်ခြင်း၊ စတီယာရင်ကို lock ချထားခဲ့ခြင်း၊ ခြေနင်းဘရိတ်(Parking Break) နင်းထားခြင်း၊ လက်ဆွဲဘရိတ် အသုံးပြုခြင်းတွေ ပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီးမှ ကားထဲက ထွက်ခွါရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မော်တော်ကား ရပ်နားထားတဲ့အချိန်မှာ ကားအခိုးမခံရစေဖို့ ဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ ကားကိုအတွင်းခန်း အနွေးဓာတ်ပေးထားခဲ့တာ ဒါမှမဟုတ် နွေရာသီမှာ ကားကိုအဲကွန်းဖွင့်ထားခဲ့တာမျိုးတွေကို ကားပေါ်မှာ စောင့်မယ့်သူမရှိဘဲ လေအေးစက်၊ လေနွေးစက်ဖွင့်ထားခဲ့တာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကားထဲကနေ မိနစ်ပိုင်းလောက် ထွက်ခွါရရင်တောင် lock ချ တံခါးပိတ်ပြီးမှ ထွက်ခွါသင့်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်း ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို၊ ကားထဲမှာ ထားခဲ့တာမျိုး လုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့မကွာ […]
ကုန်တင်ယာဉ်များကို YRTA တွင် မှတ်ပုံတင်၍ အလုံးစုံ အာမခံ ပြုလုပ်ထားမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခြင်း ခွင့်ပြုပေးမည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကုန်တင်ယာဉ်များကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA တွင် မှတ်ပုံတင်၍ အလုံးစုံအာမခံ GPS စနစ်များ တပ်ဆင်ထားမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခြင်း ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း YRTA တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း သွားလာမည့် ကုန်တင်ယာဉ်များကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA ၏ ကုန်တင်ယာဉ်ဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ရာ အလုံးစုံအာမခံနှင့် GPS များတပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံမတင်ထားသည့် ကုန်တင်ယာဉ်များအား လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ “ကုန်တင်ယာဉ်တွေအကုန်လုံးက YRTA မှာ မှတ်ပုံတင်ရမယ်။ စာရင်းသွင်းရမယ်။ ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး speed တွေ သတ်မှတ်ရမယ်။ GPS တပ်ဆင်ရမယ်။ မှတ်ပုံတင်မလုပ်တာတို့ အလုံးစုံအာမခံမလုပ်ထားတဲ့ကားတွေကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးပေးမှာ […]
ကားနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်ပေးခြင်း
ကားရောင်းချ ၊ လဲလှယ်ပေးခြင်း
ကားဟောင်း ၊ ကားသစ်များကို ရောင်းချ/လဲလှယ်ပေးခြင်း
ကိုရီးယားနိင်ငံထုတ် အဆင်မှီပေါင်းခန်းများဖြင့် ဆေးမူတ်ပေးသောကြောင့် ၊ စိတ်ချရခြင်း၊
လူကြီးမင်းတို့၏ ကားများအတွက် အထိရောက်ဆုံး အာမခံများ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
အခြားသော ဝန်ဆောင်မူများအတွက် ဆက်သွယ်နိင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Do you want to know more about our service?
ကျွန်တော်တို့၏ မှန်ကန်သော စေတနာ ပြည့်ဝသောအရည်အသွေး
အမှတ်(၁)၊ ဗဟိုလမ်း (ဘူတာရုံလမ်းနှင့် ပါရမီလမ်းကြား ) ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09- 500 5613, 09- 503 1480, 09-778177779, 09-5022577